‘ब्युटी प्याजेन्ट’ का नाममा याैन हिंसामा परेकी युवतीको पीडा- बेहोस बनाएर बलात्कार गरेका थिए « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 May 19, 2:58 pm
कृष्णसिंह धामी/काठमाडौं, ५ वैशाख : यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ । त्यसमा पनि सन् २००२ कि मिस नेपाल विजेता माल्भिका सुब्बासम्मलाई जोडिएको छ ।
बुधबार ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक एकाउटबाट एक युवतीले आफु बलात्कारको सिकार भएको जानकारी दिइन् । २/२ मिनेटका २० वटा भिडियोमा उनले कहिले ? कसरी ? बलात्कृत भइन् त्योबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।
आफू बलात्कृत भएकोबारे उनले सन् २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई समेत जानकारी दिएकी थिइन् । तर, उनले उल्टै भनिदिएछन्, ‘ग्ल्यामसर क्षेत्रमा यो त नर्मल हो ।’
२०७१ सालमा आयोजना गरिएको मिस ग्लोबल नामक ब्यूटी प्याजेन्टका क्रममा ति युवतीमाथि बलात्कार भएको थियो । उनले आफूलाई बलात्कार गर्ने र सहयोग गर्नेहरूको थर मात्र खुलाएकी छिन् । जसमा एक जना फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक रहेको बताएकी छिन् ।
रेग्मी थर गरेकी एक युवती १२ कक्षाको परीक्षा सकिएपछि ‘ब्युटि प्याजेन्ट’ मा सहभागी भइन् । उनले अडिसन दिइन् । तर, अडिसनबाट उनी छनोटमा पर्न सकिनन् । छनोटमा नपरे पनि त्यहाँ भएका तस्बिरहरू बाहिर आएपछि कुनै व्यक्तिबाट उनलाई म्यासेज आयो ।
‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं’ भनेर म्यासेज आयो । त्यति म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित भइन् । त्यसरी म्यासेज पठाउनेमा थिए, ति फोटोपत्रकार ।
ति फोटोपत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचे र उनलाई ५ हजार पैसा दिए । फोटो खिचेर उनीहरूले भने कि हामीले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दैछौं । म त्योभन्दा अगाडि पनि ब्युटी प्याजेन्टमा भाग लिइसकेकी थिएँ । त्यसले म राजी भएँ । ब्युटी प्याजेन्टको विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो । उनी तयार भइन् ।
एभरेष्ट होटलमा पार्टी आयोजना गरेको भनियो । उनी त्यहाँ गइन् । जबकि त्यहाँ कोही पनि थिएनन् । उनले प्रश्न गरिन्, खै त अरू मानिसहरू ?
उनलाई बोलाएका व्यक्तिले भने, तिमी चाँडै आयौ । अरू विस्तारै आउँछन् । राति ६/७ बजेतिरबाट पार्टी सुरू हुन्छ । तिमी बस्दै गर ।
केही समयपछि वेटर आएर लेमन जुस दिए । उनले भने,–यो वेलकम ट्रिट हो ।
त्यसपछि उनले त्यो खाइन् । खाएको १० मिनेटपछि उनी आफुलाई अनकन्सियस महसुस गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले त्यो एब्युजरलाई भनिन्- मलाई गाह्रो भयो, म घर जान चाहन्छु ।
एब्युजरले उनलाई गाली गर्‍यो । तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने ? तिम्रोबारे अरूले के सोच्लान् ? भनेर गाली गरे ।
‘यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु’ भने । त्यसपछि उनी रूममा गएर रेष्ट गर्न गइन् ।
त्यतिबेला उनी १६ वर्षकी थिइन् । जतिबेला उनको नागरिकतासमेत बनेको थिएन् । कोठामा रेष्ट गर्दा बेला-बेला उनलाई होस आइरहेको थियो । जति बेला होसमा आयो त्यतिबेला लाग्यो कोहीले उनका शरिरका अंग चलाइरहेका छन् । उनीमाथि कोही प्रयोग भइरहेको छ ।
जब उनी होसमा आइन् । त्यो बेला उनी पुरै नाङ्गै थिइन् । उनीसँगै त्यो एब्युजर पनि उनीसँगै पुरै नाङ्गै सुतिरहेको थियो । पुरै ओछ्यानभर रगत थियो । त्यसपछि उनी छाँगाबाट खसेझैँ भइन् । एकदमै ठूलो स्वरमा कराइन् ।
त्यसपछि ति एब्यूजरले उनको ब्यागमा २० हजार पैसा हालिदिए र भने, ‘तिम्रो ब्यागमा २० हजार हालिदिएको छु । घटनाबारे कोहीलाई पनि केही भन्यो भने तिम्रो नाङ्गो फोटो र भिडियो मेरो मोबाइलमा छ, सार्वजनिक गरिदिन्छु, मेराे साथी चर्चित फाेटाेग्राफर छ ।’
त्यति भनिसकेपछि उनको बोली रोकियो । निकै तनावपूर्ण अवस्थामा उनी त्यहाँबाट घरतिर लागिन् । त्यसपछि उनले ब्यालमेलिङ गरेर पटक पटक बलात्कार गरिरह्यो । कति पटक त उनले आत्महत्या गर्नेबारे पनि सोचिन् । तर, सकिनन् ।
एक जना खड्का थरका उनका केटा साथीले उनलाई निकै सहयोग गरे । केटा साथी र उनी एब्युजरको कन्सल्टेन्सीमा गए । त्यहाँका सबै कर्मचारीलाई राखेर, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र फोटो पत्रकार दुवैलाई त्यहाँ राखे । उनीसँगै विजेता बनेकी अर्की युवतीमा पनि उनीसँगै थिइन् ।
‘मैले त्यो बेला सबै कुराहरू भनेँ । मलाई गरेको फोन रेकर्ड, मलाई गरेको म्यासेज सबै देखाइदिएँ । मेरो ब्वाईफ्रेण्डले त्यो मान्छेलाई धेरै पिट्यो,’ ति युवतीले भिडियोमा भनेकी छिन् ।
समय बित्दै गयो । घटनापछिका यतिका समय निकै कष्टपूर्ण र मानसिक तनावबाटै बित्यो । घटनाबारे उनले धेरैलाई भनिन् । तर, कतैबाट पनि सहयोग मिलेन । झन उल्टै ‘तिमी नै त्यस्ति हौं’ भन्ने जवाफ मिल्थ्यो ।
यतिसम्म कि आफुमाथि बलात्कार गर्नेकी श्रीमतीलाई पनि भनिन् । उनको श्रीमतीले रूखो जवाफ फर्काइन् । ‘हैन जम्मै केटीहरू मेरै बुढोको पछि किन लाग्छन् ?’ भन्ने जवाफ उनको श्रीमतीले दिइन् ।
यतिमात्र नभएर आफूमाथि भएको बलात्कार र पीडकहरूबारे उनले सन् २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई जानकारी गराइन् । तर, माल्भिकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि उनी खिन्न भइन् ।
अहिले घटना सार्वजनिक भइसकेपछि माल्भिकाले प्रष्टीकरण दिएकी छिन् । त्यो बेला मलाई कानुनबारेमा थाहा थिएन भन्दै उनले माफी मागेकी छिन् ।
उनी ६/७ वर्षको हुँदा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यही बेलादेखि उनको सपना थियो- ठूलो भएपछि मोडल हुन्छु, कलाकार हुन्छु । तर, उनको सपना त्यही घटनाले तुहाइदियो ।
उक्त घटनापछि उनी डिप्रेशनको सिकार बनिन् । अहिलेसम्म पनि उनी उपचार गराइरहेकी छिन् । उनलाई आफुमाथि भएको बलात्कारबारे बोल्न यतिका वर्ष लाग्यो । धेरैले उनीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिले पनि केटी नै त्यस्ति हो भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
‘त्यो समय मलाई यस्तो भयो भने के गर्ने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? थाहा थिएन । अहिले पो थाहा पाएँ । अनि घटना सार्वजनिक गरेकी हुँ,’ उनले भिडियोमा भनेकी छिन् ।
उनले भिडियोमार्फत भनेकी छिन्, ‘कुनै पनि केटीहरू आफ्नो आमालाई नलगी कहिँ पनि नजानु । यो मेरो अनुरोध मात्र होइन्, बिन्ती पनि हो ।’
घटनाबारे प्रहरी जानकार :
बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा प्रहरीले चासो देखाएको छ । घटनाबारे जानकार रहे पनि पीडित युवती प्रहरीको सम्पर्कमा आउन सकेकी छैनन् । नेपाल प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले घटनाबारे जानकार रहेको, तर पीडित सम्पर्कमा नआएको बताए ।
‘हामी पीडितलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । उहाँ सम्पर्कमा आएपछि मात्रै अनुसन्धानका अन्य पाटा अघि बढ्छन्,’ एसएसपी केसीले न्युज कारखानासँग भने ।
घटना सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ । मिस नेपाल २०१८ श्रृखंला खतिवडा, नायिका पूजा शर्मा लगायतका सेलिब्रेटीहरू उनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न समेत माग गरिरहेका छन् । न्युज कारखाना File Photo
प्रचण्ड भेट्न अमेरिकी राजदूत खुमलटारमा
काठमाडौं, २६ जेठ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी डब्लु बेरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का
चुनाव घोषणा नहुँदै काठमाडौं उपत्यकामा उम्मेदवार बन्न युवा र स्वतन्त्रको सक्रियता बढ्यो
काठमाडौं, २५ जेठ । सम्भवत आगामी मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने सम्भावना
मौसमका कारण काठमाडौं आएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारततर्फ डाइभर्ट
काठमाडौं, २५ जेठ । मौसम अनुकुल नभएपछि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण नगरी दुई वटा
एआइजी विश्वराजमाथि चुनौतीः काममा फर्कने कि राजीनामा दिने
काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल प्रहरीका एआइजी विश्वराज पोखरेलमाथि नयाँ चुनौती आएको छ । उनको
अछाम किशोर मृत्यु प्रकरण : शव बुझ्ने सहमति, किटानी दिएकामाथि मुद्दा दर्ता गरिने
मोहन जोशी/धनगढी, २५ जेठ : हराएको पाँच दिनपछि मृत फेला परेका अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४
भक्तपुरमा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग
भक्तपुर, २५ जेठ : भक्तपुरका उद्योगी/व्यसायीले भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्न
फैलँदै मनसुनी वायु, आज यी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं, २६ जेठ : नेपालमा मनसुनी वायु देशभर फैलन थालेको छ । जसकारण वर्षा पनि
लोसपालाई तीनतिरबाट अफर
काठमाडौं, जेठ २६ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एक साताको अवधिमा